Xoogaga Al Qaacidda oo Tobaneeyo Maxaabiis Soomaali ah Kasii Daayay Xabsi kuyaal Magaalada Al-mukalla dalka Yemen.
Tuesday April 07, 2015 - 07:54:21 in Wararka by Super Admin
Kadib lawareegistii mujaahidiinta Al Qaacidda ay la wareegeen magaalada Almukalla ayay xuriyadooda dib u heleen tobaneeyo maxaabiis soomaali ah oo muddo sanada ah ku xirnaa xabsiyada waaweyn ee gobolka Xadramuud.
Wararka Yemen ka imaanaya ayaa sheegaya in 300 maxaabiis ah oo lagasii daayay xabsiga magaalada Al-mukalla ay kamid ahaayeen dad soomaali ah oo xukuumaddii burburtay ee Yemen ay xabsi sanada ah ku xukuntay.
Warbaahinta maxalliga Yemen ayaa baahisay in dadka Soomaalida ah ee xabsiyada Xadramuud lagasii daayay ay qabeen xanuuno kala duwan halka qaar kamid ah muwaadiniinta ay ahaayeen kuwa caafimaad qaba.
Maxaabiista qaar ayay maxkamadda gobolka Xadramuud ku xukuntay 10 sano illaa 15 kadib markii lagu helay dambiyo ah kalluumaysi sharci darra ah iyo in qaab tahriib ah ay boqolaal qof kusoo geliyeen Yemen.
Magaalada Caden ee xarunta KMG u ah Yemen ayaa lagusoo waramayaa in dadka Soomaalida ah gaareen halka kuwa kale ay qabteen dhanka magaalada Sancaa.
Waa markii ugu horraysay oo mujaahidiinta Al Qaacidda ay soo xureeyaan dad soomaali ah oo dhibaato ku heysatay xabsiyada wadanka Yemen.